Gbasara Anyị - Divenland
Redispersible ntụ ntụ
Ihe ndi ulo gypsum na putty
Usoro itinye usoro
Ihe eji akwọ ụgbọ ala
Ihe mkpuchi ihe
Cement extruded mpempe akwụkwọ
Borlọ ọrụ eji agba mmiri
Otu ụlọ ọrụ ọkachamara na-ahụ maka kemịkalụ nke pụrụ iche (RDP) na hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC), onye na-ebelata mmiri na nwa nwoke. N'ime afọ 10 nwere ahụmịhe ngwaahịa na mmepụta ngwaahịa ndị a, Divenland ga-enye gị ọrụ teknụzụ profesdstional. Na-akwado ọrụ ịzụ ahịa teknụzụ, Divenland bụkwa otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu ọgbara ọhụrụ, nke mepụtara ngwaahịa na ọrụ, na-ekpuchi ihe eji arụ ụlọ na ihe ụlọ ọhụụ, na-enye ndị na-enye ngwaahịa pụrụ iche, ahaziri ma hazie ọrụ na-eso maka ndị na-emepụta ala.
Ọ bụ ezie na Divenland na-enwe obi ụtọ ime OEM dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, iji nye ọrụ nkwado maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa .Divenland abụghị naanị nhọrọ gị, mana nhọrọ amamihe dị na ya. Anyị nwere ọdịnala na ọgụgụ isi anyị, anyị na-enyo enyo ma na-etinye teknụzụ.Cmịnye n'ịdị mma bụ otu n'ime ụkpụrụ anyị dị mkpa. Banyere ndị ahịa dị ka onye ibe anyị bụ otu n'ime ụkpụrụ anyị. Anyị na-enye nkwukọrịta dị mma, na-enye ngwaahịa dị elu na azịza kachasị mma. Gị na Divenland na-arụkọ ọrụ, anyị ga - enyere gị aka ịme nhọrọ kachasị mma maka akụrụngwa nwere ọnụahịa dị mma.
Ihe kpatara ọtụtụ ụlọ ọrụ ji ahọrọ
DIVENLAND uru isii
MAKA CARGO STORAGE
Anyị na ọtụtụ ndị ahịa rụkọrọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ubi, na ọtụtụ puku ndị ahịa hụrụ na anyị nọgidere na-enwe a elu ogo oru mgbanwe na imekọ ihe ọnụ na isi mahadum n'ụlọ na mba ọzọ ihe karịrị afọ, na anyị na nkà na ụzụ kemgbe n'ihu nke ụlọ ọrụ.
Na a zuru ezu nso nke ụdị na zuru ezu ngwaahịa, ike ikwenye logistics ike na ngwa ngwa nnyefe okirikiri, anyị nwere ike hụ na-adọ ọkọnọ.
3.Nkà na ụzụ Team
Anyị nwere nhazi ọkwa dị elu nke ụlọ nyocha ngwa, yana ọtụtụ ndị otu nka na ụzụ ngwaahịa nwere ahụmahụ, na-elekwasị anya na nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ na mpaghara ọhụụ nke teknụzụ teknụzụ ngwa.
AKW KNKWỌ OBODO
Ọrụ ahụ abụghị naanị nwere ike inyere ndị ahịa aka nyochaa ngwaahịa agwụla na nsogbu nke nsogbu ahụ, kamakwa ịnwere ike ịnabata ngwaahịa ndị ahịa mechara ka ha zipụ nyocha maka nyocha, chọpụta isi nsogbu ahụ ma dozie nsogbu ahụ.
Ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ bụ "ogo na teknụzụ", ụfọdụ ndị ụlọ ọrụ ama ama na ndị na-ebubata anụ ụlọ na-ahọrọ imekọrịta, ntụkwasị obi.
6.Ndi ike zuru oke
Gbado anya na ubi nke ihe eji arụpụta ihe eji eme ka ntụ ntụ rụọ, wuo njikwa njikwa njikwa ngwaahịa zuru oke, mmesi obi ike ngwaahịa, mepụtara iji mepụta akara ama ama.
Bụ hydroxypropyl methylcell ...
Njirimara na ojiji nke redi ...
Ngwa nke Redispersibl ...
7F, 3B Building, Aodong Mpaghara, Quanshan District, Xuzhou, China
Kpọọ Anyị Ugbu a: 0086-18118579776